Afrika Mainty · Aogositra, 2016 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Mainty · Aogositra, 2016
Tantara mikasika ny Afrika Mainty tamin'ny Aogositra, 2016
Rehefa Tsy Manadino Velively Ny Fanafihana Tany Frantsa, Miezaha Koa Mahatsiaro ireo Mahery Fo
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 31 Aogositra 2016
Mitodika any amin'ny ireo tantara feno herim-po nandritra ny fanafihana faobe farany tao amin'ny tany Frantsay ny Global Voices.
Mozambika 30 Aogositra 2016
Nogadrain'ny tafika Japoney tao Timor ny fianakavian'ilay mpihira Zeca Afonso nandritra ny ady lehibe faharoa. Vao nivoaka ho boky ity tantara notazonin'ny fianakaviana ho tsiambaratelo ity ary hivadika ho lahatsary fahadihadiana tsy ho ela.
Mihomehy Ny Tenany Ireo Afrikàna Eo Am-pieritreretana Hoe “Raha Toa Ka Sekoly i Afrika”
Zambia 29 Aogositra 2016
" i Madagasikara no ilay mpianatra iray tsy mba misy mpanasa mihitsy satria any ivelan'ny tanàna ry zareo no mipetraka."
Zambia 27 Aogositra 2016
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 23 Aogositra 2016
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 21 Aogositra 2016
Sao Tome sy Principe 06 Aogositra 2016
Nisy ny tsindry nitranga nandritra ny fanisam-bato tamin'ny fifidianana tao São Tomé e Príncipe amin'ny ahiahy fisian'ny hosoka tamin'izany. Amin'izao ankatoky ny fihodinana faharoa izao dia nisy ny fihetsiketsehana an-dalambe mitaky ny fanafoanana ny fifidianana.
Takian'ny Ogandey ho ny Sekoly no Avotan'ny Governemanta fa Tsy ny Mpanankarena
Oganda 06 Aogositra 2016
Fanomezana ho an'olombitsy ny tombombarotra sy fizarazarana ho an'ny fiaraha-monina ny fatiantoka. Tsy maintsy mandoa ny tsy fahombiazan'orinasa ve isika rehetra raha tsy mba nizara ny tombombarotra azony ry zareo?
Sao Tome sy Principe 04 Aogositra 2016
Hisy fihodinana faharoa ny fifidianana tao Sao Tomé-sy-Principe. Nisy toe-javatra mampisy adihevitra ny fanisam-bato na dia nilaza aza ny mpanaramason'ny Vondrona Afrikana fa nandeha tsy misy tomika ny fifidianana.
Zambia 01 Aogositra 2016
Hetra tsy voaloa, fisamborana, filazàna herisetran'ny polisy ary fifidianana ho avy, samy namadika ny sainan'ireo vahoaka hoe tokony avela hiasa indray ve ny gazety an-tsoratra tsy miankina, lehibe indrindra ao Zambia.